Maalin maalmaha kamid ah ayaa gaari inataree ah oo rar ku dejinayey bakhaar looga yeeray, ninkii bakhaarka lahaa ayaa ku yiri labadii nin ee miskiin ahaa Haddii aad dejisaan rarkaan gaariga saaran waxaa idiin siinayaa jawaan bariis ah sidiina ayayna faleen. Iyagoo socodka la luudayaa, jawaankiina midba mar dhabarka ku jiidayay ayay xaafadoodii yimaadeen
Waxa ay karsadeen casho, casha kadibna way seexdeen. Saqdii dhexe goor ay ahayd ayaa waxaa aqalkoodii u soo dhacay tuug, tuugii ayaa qolkii waxa uu ka raadiyey wax uu ka qaato, nasiib darrose ma uusan arkin wa uu qaato oo aan ahayn jawaanka bariiska ah. Tuugii wuxuu ku fekaray inuu xoogaa bariis oo u qaadi karo ka shubto, wuxuu raadsi u galay maro uu ku shubto bariiska, markii uu wayay wuxuu ku shubto ayuu shaatigiisa furtay, kadibna bariiskii ayuu buuxsaday, isagoo weli ku sii jeeda jawaanka bariiska, ayaa waxaa ku soo toosay mid ka mid ay miskiinkii, isagoo iska dhigaya ruux hurda, ayuu intuu laacay shaatiga tuuga oo u dhawaa hoostiisa gishtay oo uu qarsadey. Tuuggii ayaa markuu soo jeestay waayay shaartigiisa, intuu geesaha eegay ayuu yaabay.
W:/ Qoray Muxamed Cosmaan C/nuur (maxameddeeq)
002522 497419 Laascaanood3@hotmail.com